बिजुली पाएपछि २० अर्ब लगानी थप्दै होङ्शी - Sano Aawaj
व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको ३ वर्षपछि बिजुली पाएको होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानीसहित क्षमता विस्तार गरिने भएको छ ।
हालको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्न लागिएको हो । यसअघि उद्योगमा रू. ३६ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।
कुल १२ हजार उत्पादन क्षमताको उद्योगले लगानी थपेपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । थप लगानी र क्षमता विस्तारमा पनि लगानी मोडालिटी भने पुरानै हुनेछ । हाल सञ्चालित उद्योगमा चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी हङकङ रेडलायनको ७० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता शिवम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी छ । यही मोडालिटीअनुसार नै उद्योगमा थप लगानी विस्तार हुने उनले बताए । क्षमता विस्तार गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी थप्नेछन् ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
यो पनि, इजिप्ट मा बिच्छीले टोकेर तीनजनाको मृत्यु
बीबीसी । इजिप्टको दक्षिणतर्फ अस्वन शहरमा बिच्छीको टोकाइबाट तीनजना मानिसको मृत्यु भएको छ भने ४५० बढी घाइते भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हावाहुरी र भारी वर्षाका कारण यतिबेला सडक र मानिसहरुको घरभित्र बिच्छीको बिगबिगी बढेको बताइएको छ ।
शुक्रबार नाइल खोलाको नजिकतिर असिना पर्नुका साथै बिजुली चम्किँदै आक्रामक वर्षा भएको थियो । यसले सर्पहरुलाई पनि प्रभाव पारेको हुँदा जताततै फेला पर्ने खतरा बढाएको छ । यस्तोमा पहाड, मरुभुमी नजिकका गाउँमा रहेका मेडिकल सेन्टरहरुमा अहिले ‘एन्टि–भेनोम’का अतिरिक्त डोजहरु प्रदान गरिएको छ ।
मानिसहरुलाई धेरै रुख भएका स्थलमा नजान र घरभित्रै बस्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
इजिप्टमा संसारकै सबैभन्दा विषालु बिच्छीहरु पाइन्छन् । जस्तै एउटा ‘फ्याट–टेल’ ले टोक्यो भने एक घण्टा भन्दा कम समयमै मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ । बिच्छीले टोकिसकेपछि व्यक्तिलाई सास फेर्नमा कठिनाइ हुने, मांसपेसी दुख्ने र टाउकोमा असामान्य हलचल हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
एन्टि–भेनोमले लक्षण देखा पर्नु अगाडि विषको असरलाई कम गर्न बचाउको काम गर्दछ र लक्षण खराब बन्दै गएको अवस्थामा पनि ठीक गर्न सक्छ ।
Posted in Breaking news 1, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट
Prevइजिप्टमा बिच्छीले टोकेर तीनजनाको मृत्यु
Nextरोनाल्डो विश्वकप खेल्न कतार नआउने निणर्य